तनाव व्यवस्थापनका सरल उपाय – Chitwan Post
तनाव भन्नाले कुनै पनि सत्य घटना, परिघटना वा काल्पनिक घटनाका कारण मानिसको मनमा उत्पन्न हुने श्रेणीबद्ध एउटा प्रक्रिया हो जसले मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक र आध्यात्मिक स्वास्थ्यमा समस्या उत्पन्न गराई मानिसको दैनिकीमा परिवर्तन गराउँछ । चिकित्सा र जीवविज्ञानका अनुसार तनाव भन्नाले शारीरिक, मानसिक र संवेगात्मकरुपमा परिवर्तन भएको एक अवस्था हो जुन शारीरिक र मानसिक दबाबका कारण उत्पन्न हुन्छ । यस्तो तनाव बाहिरी (वातावरण, मनोविज्ञान र सामाजिक परिस्थिति) र भित्री (रोग लागेर) गरी दुई किसिमले हुने गर्दछ । तनावका कारण स्नायु तथा ग्रन्थीप्रणालीमा नकारात्मक प्रभाव परी कहिलेकाहीँ जटिल परिस्थितिको सृजना हुन्छ ।
तनावयुक्त परिस्थितिहरु मानिसको जीवनमा सबैले अनुभव गर्ने गर्दछन् । तनाव राम्रो र नराम्रो दुवै हुनसक्छ । राम्रो खालको तनावले कहिलेकाहीँ व्यक्तिको जीवनमा उत्साह र सफलता पनि ल्याउँछ । जस्तैः जाँच आएको कारण हुने तनावले पढ्ने मनस्थिति बनाउनु, प्रतिस्पर्धाको तनावले बढी परिश्रमी र मेहनती बनाउनु, बच्चामा सिकाइका लागि तनाव उत्पन्न हुनु आदि । यसैगरी, नराम्रो खालको तनावले निकै नकारात्मक अनुभूति दिलाउने, रिसाहा हुने, मनोरोगी हुने, जीवन भताभुङ्ग हुने र स्वास्थ्यसम्बन्धी निकै गम्भीर समस्याहरु थपिने गराउँछ ।
तनाव मुख्य दुई किसिमका हुन्छन्, ती हुन् :
१. तीव्र तनाव : भर्खरै घटेको घटनाका कारण मनमा उत्पन्न हुने नकारात्मक परिस्थितिलाई तीव्र वा एक्कासि उत्पन्न हुने तनाव भनिन्छ । जीवनमा यस्ता तनावहरु जोकोहीलाई आइपर्न सक्छन् । यस्तो तनाव छोंटो समयका लागि मात्र आउँछ जसले गर्दा कुनै क्षति हुन पाउँदैन ।
२. जीर्ण तनाव : यो निकै लामो समयदेखि सुरू भई लामो समयसम्म रहिरहने तनाव हो । स्वास्थ्यका लागि निकै हानिकारक यस्तो तनावले स्मरणशक्तिसमेत ह्रास गराउन सक्छ । यस्तो तनाव पुरूषमा भन्दा महिलामा बढी देखिन्छ ।
अहिलेको युगमा तनाव एउटा विश्वव्यापी समस्याको रुपमा देखा परिरहेको छ । केही दशकअघिदेखि सुरू भएको सामाजिक परिवर्तन, प्रविधिको उल्लेखनीय विकास, यातायात क्षेत्रको उल्लेखनीय प्रगति आदिले गर्दा सबैको सबैमा पहुँच, धनी र सुखी बन्ने चाहनाजस्ता कारणले मानिसको जीवनमा भयंकर दबाब र तनावको सृजना भएको छ । तनाव केवल बुझ्ने मानिसलाई मात्र नयाँ किसिमले सृजना भएको समस्या नभई बच्चा, युवा, नवविवाहिता, काममा व्यस्त हुने व्यक्तिहरु, एकल जीवन जिउने, प्रौढ व्यक्ति आदिमा समेत देखा पर्ने गरेको छ । दीर्घकालीन तनावको कारण किशोरावस्थामा आत्महत्याको समस्या र बच्चाको वृद्धि हर्मोनमा कमी आई पुड्कोपनको समस्या देखिएको छ । बच्चामा देखा पर्ने तनावका स्रोतहरु पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालय तथा अन्य बाहिरी परिस्थिति नै हुन् ।
बच्चामा तनावले पार्ने प्रभावहरु
तनावले सबै व्यक्तिहरुलाई प्रभाव पार्दछ । बच्चा, युवा, किशोर, प्रौढ, वृद्ध, महिला, पुरूष जोकोही पनि तनावबाट अछूतो रहन सक्दैन । उदाहरणका लागि २ वर्षे बच्चा पनि चिन्तित भई तनावबाट ग्रस्त हुनसक्छ, किनकि उसले अभिभावकबाट पूर्ण सन्तुष्टि नपाउन सक्छ वा उसका आवश्यकता पुरा नहुन सक्छन् । त्यस्तै, स्कुल जानुपूर्वको बच्चालाई उसको आमाबाट छुट्टिनु नै ठूलो चिन्ताको विषय बन्न जान्छ । त्यस्तै, बच्चालाई कुनै चाइल्ड केयर सेन्टर वा मन्टेश्वरी स्कुलमा पठाई दिनभर आमाबाबा कुनै काममा जानु बच्चाको लागि उपयुक्त परिस्थिति नै होइन । यस्ता कारणले बच्चालाई शिशु अवस्थादेखि नै तनाव झेल्नुपर्दछ ।
त्यस्तै, जब बच्चा ठूलो हुन थाल्छ उसमा शैक्षिक तथा सामाजिक दबाबका कारण त्यहाँ समायोजन हुनमा समस्या पर्छ । त्यस्तै, अभिभावकले पनि बच्चाको पढाइ, शैक्षिक उन्नति, खेलकुद, विभिन्न क्रियाकलापमा अब्बल हुनका लागि बच्चासँग अपेक्षा राख्न सक्छन् । यसले पनि बच्चामा अनावश्यक तनाव र दिग्दारी पैदा गर्दछ । यसैगरी बच्चाले टेलिभिजन, मोबाइल, फिल्म आदि हेरेर र नयाँ घटना तथा दर्दनाक समाचार सुनेर पनि आफूमा डर उत्पन्न गर्नसक्छ, जसले गर्दा उसमा सुरक्षाको खतराका कारण चिन्ता तथा तनाव उत्पन्न हुन्छ । यस्तो अवस्थामा बच्चालाई उचित निर्देशन र परामर्श दिन नसकिएमा तनावको दर बढ्न सक्छ ।
तनावले शरीरमा पार्ने असरहरु
यीबाहेक तनावले धेरै किसिमका मानसिक र शारीरिक समस्याहरु उत्पन्न गराउँछ, जस्तैः
– मनोवैज्ञानिक समस्याहरु ः डिप्रेसन, चिन्तालगायतका अन्य गम्भीर प्रकृतिका मानसिक समस्याहरु ।
– शारीरिक समस्याहरु ः चोटपटक लाग्ने, पेटका समस्याहरु, टाउको दुखाइ, बुढ्यौली, छालाका समस्या, दमरोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, अम्लपित्तको समस्या, प्याङ्क्रियाजमा समस्या, प्रजनन् अङ्गमा समस्या, मांसपेशी तथा जोर्नीमा समस्या, थकावटजस्ता अन्य समस्याहरु पनि देखिन्छन् ।
तनाव सुन्दा जति जटिल समस्याजस्तो लाग्छ त्यसको समाधानचाहिँ निकै सरल खालका हुन्छन् । हामीले हाम्रो जीवनशैलीमा थोरै परिवर्तन गर्नासाथ र सोचाइमा परिवर्तन ल्याउनासाथ तनाव व्यवस्थित हुनथाल्छ । विश्वव्यापी समस्याको रुपमा रहेको तनाव व्यवस्थापनका लागि विभिन्न विधिहरु प्रचलित छन् । तनाव व्यवस्थापनका लागि सबैभन्दा राम्रो र पहिलो खुड्किलो नै शारीरिक अभ्यास हो । शारीरिक अभ्यास नगरी बसिरहँदा, उभिइरहँदा वा एकोहोरोरुपमा सोचिरहँदा तनाव हर्मोनको उत्पादन हुनेगर्छ भने शारीरिक अभ्यास गर्दा तनाव घटाउने हर्मोनको उत्पादन हुन्छ । यीबाहेक तनाव व्यवस्थापनका अन्य विधिहरु यसप्रकार छन् :
– शरीर स्वस्थ राख्ने (हल्का व्यायाम, सन्तुलित आहार, उपर्युक्त सुताइ, उत्तेजना हटाउने र सही आसनमा बस्ने गरेर) ।
– स्वस्थकर सामाजिक मित्रता कायम गर्ने, स्वस्थकर सामाजिक सम्बन्ध राख्ने, आफ्ना र अरुका लागि पनि समयको व्यवस्थापन मिलाउने, आफ्ना अनुभूति र अनुभवहरु अरुलाई पनि बाँड्ने, अरुका सही कुरा स्वीकार गर्ने र आफूलाई मन नपरेको कुरामा नाइँ भन्ने ।
– आराम र धैर्य रहने तरिका अपनाउने, नकारात्मक प्रभावबाट मुक्त हुन ध्यान, प्रार्थना, गहिरो श्वासप्रश्वास, मालिस, आनन्द आउने पढाइ, तातो पानीले नुहाउने र आफ्नो रूचिअनुसारको काम गर्ने ।
– तनाव व्यवस्थापनका लागि दिनमा एक वा दुईपटक २० देखि ३० मिनेटसम्म ध्यान गर्ने, ध्यान गर्नाले दीर्घकालीन फाइदा पुग्ने कुरा वैज्ञानिकरुपमै पुष्टि भइसकेको छ ।
– तनाव उत्पन्न गराउने त¤वहरुदेखि सचेत रहने र आफ्नो स्वास्थ्यमा ध्यान दिने ।
– कामपछि अनिवार्य आराम गर्ने ।
– पर्याप्त र गहिरो निद्रामा डुब्ने ।
तनाव जीवनमा जोकोहीलाई हुने सामान्य अवस्था पनि हो, जसले हामीलाई विभिन्न ज्ञान दिन, अनुभव प्राप्त गर्न, शिक्षामा प्रगति गर्न र समस्या समाधान गर्नमा सहयोग गर्दछ, अथवा तनाव सामान्य, सकारात्मक र नकारात्मक ३ वटै अनुभवको संयोजन पनि हो । तनाव बाहिरी र भित्री दुवै वातावरणबाट प्राप्त हुन्छ ।
यदि हामीले तनाव उत्पन्न भएमा कुनै कदम चालेनौँ भने स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या पैदा हुन्छ । तनावलाई हटाउन पीडितलाई माया, ममता, प्रेम, हौसला दिएर, नियमित शारीरिक अभ्यास गरेर, ध्यान गरेर, आरामका विधिहरु अपनाएर, जीवनका उतारचढावलाई आत्मसात् गरेर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । तनावबाट मुक्ति पाउन भनेर मानिसले गलत खालका आनीबानी अपनाउने (जस्तैः लागू पदार्थ, धूमपान, मद्यपान आदिको सेवन) गर्नाले तनाव निको हुने नभई झन् समस्या थपिन सक्छ । आफूले व्यवस्थापन नै गर्न नसकिने तनावलाई सामाजिक सहयोगले व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । कहिलेकाहीँ मनोरोग विशेषज्ञको सल्लाहअनुसार केही औषधि उपचारको समेत सहयोग लिन सकिन्छ । अतः तनाव हटाऔँ, नियमित शारीरिक अभ्यास गरौँ, सन्तुलित आहार गरौँ, सदा स्वस्थ रहन खुसी र सुखी पनि बनौँ
‘सबन मु’ चितवनमा